साताको तस्वीर : रमाईलो ढोरपाटन, घमाईलो ढोरपाटन ! – ebaglung.com
२०७५ चैत्र १७, आईतवार १६:३२	Footer Slider, Full Slider, Top News, अन्य समाचार, विविध
शव्द/चित्र : अर्जुन ढकाल
बुर्तिवाङ, २०७५ चैत १७ । यस वर्ष अघिल्ला वर्षहरु भन्दा भारी हिमपातका कारण चिसिएको ढोरपाटन चैत महिनाको पहिलो साता देखी घमाएको छ । बेसी गाउँदेखी गाईबस्तु भेँडाबाख्रा र बन्दोबस्तीका सरसामान बोकेर स्थानीयवासीहरु ढोरपाटन फिरेपछ ढोर उपत्यका निकै रमाईलो बनेको छ । जता हे-यो त्यता पशुचौपायहरु चरिरहेको दृश्य एकातिर देख्न सकिन्छ भने अर्कोतिर आलु रोप्न भ्याईनभ्याई छ ।
लगभग लगभग अधिकांश स्थानीयले आलु रोपिसकेका छन् । स्थानीयको मुख्य खाद्यबाली भनेकै आलु हो । आलु खेती ढोरमा वर्षमा दुई पटक लगाईन्छ । ढोरको आलुको स्वाद औधि मीठो हुन्छ । ढोरपाटनको आलु भने पछी कस्को मुख नरसाउला ?
सबै गाउँलेहरु ढोर उक्लिएपछी ढोर गुल्जार बनेको छ । गर्मी चढ्दै गएपछी जंगली झार पात फुलहरु टुसाउन/पलाउन थालेका छन भने आन्तरिक पर्यटकहरुको ओईरै लाग्न थालेको छ । पछिल्लो समय देशका विभिन्न जिल्लाहरुबाट वनभोजका लागि युवा युवतीहरु ढोरपाटन आउने क्रम बढेको छ । चित्ताकर्षक मनोरम दृश्यावलोनका साथै जैविक अध्ययनको रोजाईमा परेको छ ढोरपाटन ।
यस मौसममा ढोरपाटन आउने आगन्तुकहरुलाई न्यानो आतिथ्यता, घोँडसवारी, तिब्बती शरणार्थीहरुले बनाएका बोद्ध गुम्वाहरुको अवलोकन, स्थानीयको रहन सहन भेषभुषासंग परिचित हुने अवसर प्राप्त हुन्छ । प्रशिद्ध ढोरबराहको दर्शन, मुलुककै एकमात्र शिकार आरक्षमा विदेशी शिकारीहरको चहल पनि देख्न सकिन्छ । ढोरपाटन उपत्यकामा अझैपनि हिउँ जमेको दृश्यले आगन्तुकहरु लालायित हुन्छन् । प्राय: चैतको अन्तिम तिरपनि ढोरपाटनमा हिमपात हुने गरेको छ ।
ढोरपाटन उपत्यका पुग्नु केहि किलोमिटर ओरै रहेको रुद्रताल आगन्तुकहरुको मनै हर्ने एकार्को मनोरम स्थल हो । यो रुद्रताल बडीगाड खोलाको शिर मानिन्छ । बडीगाड खोलाको खास नाम रुद्रावती हो, जुन गुल्मी रुद्रवेणी(नी)मा पुगेर पवित्र कालीगण्डकी नदीमा मिसिन्छ । रुद्रताल वरपर रहेका विशाल वृक्षहरुको फेँदका प्वाल (धोन्द्रो)मा लुकामारी खेल्न सकिन्छ ।